Manualidades On dia tranokala natokana ho an'ny tontolon'ny DIY izay anoloranay hevitra maro haingo sy tany am-boalohany ho anao. Mba hanampiana anao, ny ekipa tranonkala dia olona mazoto maniry hizara ny zavatra niainany sy ny fahaizany eo amin'ny tontolon'ny asa tanana.
El Ekipa mpanonta ny Crafts On Nosoratan'ireto mpanoratra manaraka ireto fa raha tianao ho anisan'izany koa aza misalasala manorata anay amin'ireto endrika manaraka ireto:
Satria tsaroako fa tiako ny namorona tamin'ny tanako: nanoratra, nandoko, nanao asa-tanana ... Nandalina ny tantaran'ny zavakanto, ny famerenana amin'ny laoniny ary ny fitehirizana ary mifantoka amin'ny tontolon'ny fampianarana aho izao. Saingy amin'ny fotoanako dia mbola tiako ny mamorona ary afaka mizara ny sasany amin'ireo zavaboary ireo.
Tena tiako ny famoronana sy ny asa tanana hatramin'ny fahazazako. Mikasika ny tsiriko dia mila milaza aho fa mahatoky tsy misy fepetra ny mofomamy sy ny fakana sary, nefa koa tiako ny mampianatra ny fahaizako rehetra amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Mampientam-po ny afaka manao zavatra be dia be izay azo atao amin'ny tanantsika ary mahita ny halehiben'ny fahaizantsika.
Izaho dia mamorona voajanahary, tia ny zavatra vita tanana rehetra ary be fitiavana amin'ny fanodinana. Tiako ny manome fiainana faharoa ho an'ny zavatra rehetra, mamolavola sy mamorona izay azonao eritreretina amin'ny tanako manokana. Ary ambonin'izany rehetra izany, mianara hampiasa indray ho faritry ny fiainana. Ny teny filamatra tiako dia, raha tsy mety aminao intsony dia avereno ampiasaina.
Tsy misy manome fahafaham-po kokoa noho ny fahitana ny asa tanana vitanao manokana. Fialam-boly mahatsikaiky sy mamorona izany. Jereo ny fanangonako ary atombohy hampihatra ny fahaizanao. Hahafinaritra anao!
Marian no anarako, nandalina ny haingo sy ny endrika anatiny aho. Izaho dia olona mavitrika tia mamorona amin'ny tanako: manao hosodoko, mametaka, manjaitra ... Tiako foana ny asa tanana ary zaraiko aminao izao.
Bachelor ny tantaran'ny mozika sy ny siansa, mpampianatra gitara kilasika ary diplaoma amin'ny fampianarana Music Music. Hatramin'ny fahazazako dia liana tamin'ny asa tanana aho. Ny loko dia iray amin'ireo fanamarihako momba ahy. Manao lesona amin'ny Internet aho mba hahafahan'ny olona maro kokoa mizara ny fitiavany mamorona amiko.
Mpanoratra, tonian-dahatsoratr'ilay bilaogy sy fantsona YouTube "El Taller de Ire", namorona atiny momba ny DIY, asa-tanana ary asa-tanana. Manam-pahaizana manokana amin'ny mozika, mamorona vokatra artisan an'ity teknika ity ho an'ny fivarotana haingon-trano, ary amin'ny tanimanga polymer ary koba malefaka, miforona sy miasa mandritra ny 2 taona mahery ho an'ny Jumping Clay.
Tiako foana ny asa tanana satria mihevitra ny tenako ho olona mamorona aho. Mahaliana ahy ny fomba ahafahanao manao zavatra lehibe amin'ny loharano vitsivitsy.
Avy tao Rosario, Arzantina, saika tsy nahy aho nanomboka namorona atiny anaty tranokala rehefa nitady ny mari-pahaizana momba ny lalàna aho. Tiako ny asa tanana hatramin'ny mbola kely, ary manome azy ireo fiainana faharoa hatrany amin'izay ho nariana.
Izaho dia olona mavitrika, mavitrika ary mahomby. Tiako ny manoratra sy mizara ny zavatra noforoniko ho an'ny Blog, satria amin'izany fomba izany no hizarako azy ireo amin'ireo toa ahy izay manana firaiketam-po amin'ny asa tanana.
Voajanahary ny famoronana ary ny fisainana no mahatonga antsika hamorona. Manantena aho fa ny zavatra noforoniko dia manolotra anao hevitra, ary mikasika mba hampiendrehana ny fiainanao. Satria raha ao an-tranontsika isika dia manantena ny hahita ny taratry ny fanehoana hoe iza isika.